10 Arrimood Oo Lagu Xasuusanayo Zidane
HomeWararka Maanta10 Arrimood Oo Lagu Xasuusanayo Zidane
04/01/2017 Abdiwahab Ahmed
January 4, 2016, Zinedine Zidane ayaa loo magacaabay tababaraha cusub ee Real Madrid oo xilka kala wareegay Rafa Benitez ka hor intii aanu Los Blancos ku hoggaaminin inay ku guuleysato Champions League, UEFA Super Cup iyo Club World Cup.
Shaqo adag iyo dedaal badan kaddib, tababarahan u dhashay France kooxdiisu nasiib wanaagsan ayay yeelatay, 37 kulan oo xidhhiidh ahna lagama badinin.
Haddaba, waxa shabakadda ciyaaraha CADALOOL, ay halkan idiinku soo gudbinaysaa 10 arrimood oo ku xusan xusuusta Zidane iyo dadka taariikhaha Madrid ururiya.
1. Muuqaalkiisa maalintii tababaraha laga dhigay (January 4)
2. Kulankiisii koowaad ee uu tababare noqdo Estadio Santiago Bernabeu (January 9): Kulankiisii koowaad isagoo tababare ah ayaa uu waajahay Deportivo La Coruna, waxaanay uu u dabbaal-degay guul 5-0 oo ay kooxdiisu ka gaadhay Deportivo. Goolasha waxa u dhaliyey Gareth Bale oo saddexley saxeexay iyo Karim Benzema oo laba gool raaciyey.
3. Ciyaartii 1aad ee Champions League ee uu tababare noqday (February 17): Roma ayaa uu u safray kulankiisii koowaad ee Champions League uu gadhwadeenka u noqdo Real Madrid, waxaana garoonka Olimpico uu 2-0 ku garaacay kooxdii uu martida u ahaa.
4. Guul-darradiisii koowaad (February 27): Atletico Madrid oo qaab-ciyaareed wanaagsan ku jirta ayaa saddexda dhibcoodna ka wada qaadatay, ka hor intii aanay Los Blancos bilo kaddib ka aar-goosanin.
5. Ciyaartoyga oo uu farta u saaray khaladkooda (March 13): Markii ay dirqi kaga badiyeen Las Palmas, Zidane waxa uu u sheegay ciyaartoygiisa in haddii ay sidaas oo kale u ciyaaraan aanay meel gaadhi doonin.
6. Soo rogaal-celintii Wolfsburg (April 12): Wolfsburg oo garoonkeeda joogta ayaa Real Madrid ku garaacday 2-0 ciyaar ka tirsanayd tartanka Champions League, laakiin kulankii labaad oo Madrid ka dhacay, waxay Real guushu ku raacday 3-0, dhamaan goolashana waxa dhaliyey Cristiano Ronaldo.
7. Guushii Undecima (May 28)
Ciyaartii afar dhamaadka markii ay kooxda reer Germany ka daba yimaaddeen, Los Blancos waxay waajahday Atletico Madrid oo ay ciyaartii finalka Champions League isku haleeleen. Rikoodhihii koowaad waxa laagtay Vazquez oo aan laga filaynin, si fiicana ugu hubsaday shabaqa, gool-ku-laaggii u dambeeyeyna waxa shabaqa ku ruxay Cristiano Ronaldo, sidaas ayaanay Real Madrid ku qaadday Champions League markeedii 11aad.
8. Guushii UEFA Super Cup (August 9)
Ciyaar fudud may ahayn, waxaanay u baahatay in goolka mucjisada ah ee wakhtiga dambe uu ku caawiyo Sergio Ramos, markii ay Sevilla soo bandhigtay adag. Zidane ayaa sidaas kaga qaaday Sevilla koobka UEFA Super Cup.
9. Xal u helidda niyad-jabkii Ronaldo (September 25)
Ronaldo ayaa ka cadhooday beddel uu ku saaray kulankii Las Palmas, laakiin tababaraha ayaa arrinta u dhameeyey si dublomaasiyeysan, inyar kaddibna jid ayey wada qaadeen isaga iyo Ronaldo.
10. World champions (December 18)
Saddexley uu Ronaldo dhaliyey ayaa Real Madrid ay ku qaadday koobkeedii saddexaad ee sannadka 2016. Ramos oo goolkiisii mucjisada ku shubay iyo Ronaldo ayaana loo sibir-saaray inay keeneen guusha Club World Cup oo ay koobka ka hor qaadeen naadiga reer Japan ee Kashima Antlers.
Caddayn: Barcelona Ayaa Iska Leh Horyaalka LaLiga Sannadkan
22/10/2017 Abdiwahab Ahmed
Salif Diao: Waxbarashada iyo kubadda waa la isku wadi karaa
28/06/2017 Abdiwahab Ahmed
Wasaaradda Ciyaaraha Somaliland Oo Lagu Eedeeyey Xil Gudasho La’aan
10/02/2015 Abdiwahab Ahmed